ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ (Brain Rules)စာအုပ်ကို မော်လီကျုးဆိုင်ရာ ဇီဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သော ဒေါက်တာဂျွန်မက်ဒီးနား(Dr. John Medina)မှ ရေးသားထားပါသည်။ စာအုပ်နာမည် အပြည့်အစုံမှာ "Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School" (ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းများ - အလုပ်၊ အိမ်နှင့် ကျောင်းတို့တွင် ရှင်သန်တိုးတက်ရန် လိုက်နာရမည့် ၁၂-ချက်) ဖြစ်သည်။ ဦးနှောက်မည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်ကို ထိုစာအုပ်တွင် အမြင် ၁၂-ချက်သုံးပြီးရှင်းပြထားသည်။ အဆိုပါ ၁၂-ချက်မှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၊ ရှင်သန်ကျန်ရစ်အောင် စွမ်းဆောင်မှု၊ ဦးနှောက်အတွင်း ချိတ်ဆက်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ရေတိုမှတ်ဉာဏ်၊ ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အာယတနမျိုးစုံမှ ထိတွေ့ခြင်း၊ အမြင်အာရုံ၊ မိန်းမယောက်ျားကွဲပြားမှု နှင့် စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာဂျွန်မက်ဒီးနားဖတ်မိသော ဆောင်းပါးတစ်ချို့နှင့် စာအုပ်တစ်ချို့တို့တွင် အလွန်ပင်အံ့ဩစရာကောင်းသော ရေးသားပြောဆိုမှုတစ်ချို့ (ဥပမာ၊ မိုးဇ(တ်)၏ ဂန္ဓဝင်သီချင်းများကို နားထောင်လျှင် ဉာဏ်ပိုကောင်းလာသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခြင်းမျိုး)ကို တွေ့ရပြီး၊ ဦးနှောက်မည်သို့ အလုပ်လုပ်သဖြင့် ကျနော်တို့ မည်သို့ စာပေသင်ကြားသင့်ကြောင်း၊ အလုပ်ကို မည်သို့လုပ်သင့်ကြောင်း စသဖြင့်အကြံပေးပြောဆိုမှုများကို အခိုင်အမာဆိုထားသည်များကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် ဒေါက်တာဂျွန်မက်ဒီးနား နားလည်ကျွမ်းကျင်သော ဦးနှောက်သိပ္ပံ(brain science)ဆိုင်ရာ စာပေစာတမ်းများတွင် အထက်ပါအချက်များအတွက် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများကို လုံးဝရှာမတွေ့ရပေ။ ဒေါက်တာဂျွန်မက်ဒီးနားက အဆိုပါမှားယွင်းချွတ်ချော်သော အယူအဆများ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းသည် ဦးနှောက်သိပ္ပံပညာရှင်များမှ သူတို့၏နယ်ပယ်ပြင်ပ၌ရှိသော အခြားသူများ(ဥပမာ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ ပညာရေးလေ့လာသင်ကြားသူများ၊ အစရှိသောပြင်ပလူများ)နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရှင်းပြခြင်းများ အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်ဟု ကောက်ချက်ချသည်။ ထိုကြောင့် ဦးနှောက်သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်ပြင်ပရှိသူများမှ ဦးနှောက်မည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်ကို စနစ်တကျနားလည်သိရှိပြီး သင်ကြားလေ့လာရေးနှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တို့၌ ထိုအချက်များကို အသုံးချကာ ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဤစာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။  ဤစာအုပ်တွင် ကိုးကားသော သုတေသနတွေ့ရှိချက်မှန်သမျှသည် ပညာရှင်အချင်းချင်း တင်းကျပ်စွာ တည်းဖြတ်အတည်ပြုပြီးမှသာ ရေးသားဖြန့်ချိခွင့်ပြုသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာဂျာနယ်များတွင်သာ ဖေါ်ပြထားသည့် တွေ့ရှိချက်များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိုသုတေသနပြုချက်များကို မည်သူမဆို ပြန်လည်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါ၌ မူလရေးသားဖေါ်ပြသည့် တွေ့ရှိချက်များအတိုင်း တသွေမတိမ်း ပုံစံတူ သက်သေပြရရှိနိုင်သော တွေ့ရှိချက်များသာ ဖြစ်သည်။  စာရေးဆရာအသုံးပြုသော အကိုးအကားအားလုံးကို ဤနေရာ Archived 24 March 2018 at the Wayback Machine.တွင် ရယူစစ်ဆေးနိုင်သည်။
လူစီယာနိုပါဆွဲလို(Luciano Passuello)၏ ဝေဖန်စာတမ်းတွင် ဤစာအုပ်တွင်ပါသော ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်း ၁၂-ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု - ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသည် ဦးနှောက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးပွားစေသည်။
ရှင်သန်ကျန်ရစ်အောင် စွမ်းဆောင်မှု - လူသားတို့၏ ဦးနှောက်သည် အမြဲတမ်းရှင်သန် ပြောင်းလဲနေသည်။
ဦးနှောက်အတွင်း ချိတ်ဆက်မှု - ဦးနှောက်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအတွင်းပိုင်း ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားပုံများသည် မတူကြပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှု - ကျနော်တို့သည် စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းသော အရာများပေါ်တွင် အာရုံစိုက်၍ မရပါ။
ရေတိုမှတ်ဉာဏ် - စွဲမြဲမှတ်မိရန် ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့ကျင့်ပါ။
ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် - ထပ်ခါထပ်ခါ လေ့ကျင့်ရန် မမေ့ပါနှင့်။
အိပ်စက်ခြင်း - အိပ်ရေးကောင်းမွန်မှသာ တွေးတောကြံဆမှုများ ကောင်းနိုင်မည်။
စိတ်ဖိစီးမှု - စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေသော ဦးနှောက်၏ လေ့လာမှတ်သားပုံမှာ ပုံမှန်နှင့် မတူတော့ပါ။
အာယတနမျိုးစုံမှ ထိတွေ့ခြင်း - (လေ့လာမှုများ၊ ရှင်းပြမှုများတွင်) အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့ အာရုံပေါင်းစုံဖြင့် စိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆွပါ။
အမြင်အာရုံ - အမြင်အာရုံသည် (မှတ်မိရန်အတွက်) တခြားအာရုံများထက် ပိုအထောက်အကူပြုသည်။
မိန်းမယောက်ျားကွဲပြားမှု - မိန်းမ၏ ဦးနှောက်နှင့် ယောက်ျား၏ ဦးနှောက်သည် မတူကြပါ။
စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း - ကျနော်တို့သည် ပင်ကိုအားဖြင့် စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၌ အားသန်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဤစာအုပ်ကို ပဲယားပရက်စ်(Pear Press)မှ ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ စာမျက်နှာ ၃၀၈-မျက်နှာ ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၁-ခုနှစ်တွင် စ(ခ်)ရိုက်ပါဘလီကေးရှဲန်စ်(Scribe Publications)မှ အီး-စာအုပ်(ebook)အနေဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၁၄-ခုနှစ်တွင် အသံ-စာအုပ်(audiobook)အနေဖြင့် ပဲယားပရက်စ်မှ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ စာအုပ်ဖတ်ပြသူမှာ စာရေးဆရာကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။
စာအုပ်များကို စာဖတ်သူများစုပေါင်းဝေဖန်သုံးသပ်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဂွတ်ဒ်ရိ(ဒ်စ်) (goodreads)တွင် အကဲဖြတ်ချက် ၂၈၉၃၆ ခုအပေါ် အခြေခံ၍ ပျဉ်းမျှယူပြီး ၄.၀၂ အဆင့် ရရှိထားသည်။ (တစ်ဦးခြင်းအမြင့်ဆုံးပေးနိုင်သော အကဲဖြတ်အဆင့်မှာ ၅ ဖြစ်သည်။) နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်(The New York Times)သတင်းစာ၏ အရောင်းအကောင်းဆုံးစာအုပ်များ အပတ်စဉ်စာရင်းထဲတွင် နံပါတ် ၁၄ နေရာသို့ ၂၀၀၉၊ ဇွန်လ ၁၄ ရက်တွင် အကြံပေးနှင့်အထွေထွေ အဖုံးပျော့စာအုပ်များ(Paperback Advice & Misc. Books) ခေါင်းစဉ်အောက်မှနေပြီး ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
စာရေးဆရာ၏ စာအုပ်ဆိုင်ရာ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဦးနှောက်၏ စည်းမျဉ်းတစ်ချက်စီအတွက် ပို၍အသေးစိတ်သော ရှင်းပြချက်များကို ဗီဒီယိုများနှင့်အတူ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
↑ John Medina (Author of Brain Rules)။ 2019-05-07 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Exercise boosts Brain Power | Dr Shock MD PhD (2009-03-29)။ 2016-07-08 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Medina၊ John (2014)။ Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School (Second Edition ed.)။ Seattle, WA, U.S.A.: Pear Press။ p. 12။ ISBN 978-0-99603-260-5။ CS1 maint: extra text (link)
↑ ၄.၀ ၄.၁ B. Nemeroff, MD, PhD၊ Charles (2009-02-04)။ "Brain Rules | Psychiatric Times"။ 2019-01-31 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စာရေးဆရာအသုံးပြုသော အကိုးအကားများ။ 2018-03-24 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Passuello၊ Luciano (2009-03-30)။ Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School (in en-gb)။ 2019-05-15 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Brain Rules by John Medina · OverDrive: eBooks, audiobooks and videos for libraries။ 2020-06-10 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2020-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School (in en-gb)။ 2020-04-11 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Paperback Advice & Misc. Books - Best Sellers - Jun 14, 2009 - The New York Times (in en-us)။ 2020-06-09 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဦးနှောက်၏_စည်းမျဉ်းများ&oldid=653707" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။